तालिवानी आक्रमणको शिकार बनेकी मलालाको दुःखेसोः अब अफगानिस्तान गयो « News24 : Premium News Channel
तालिवानी आक्रमणको शिकार बनेकी मलालाको दुःखेसोः अब अफगानिस्तान गयो
काठमाडौं । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजईले तालिवानसंगको आफ्नो भयानक अतीतलाई सम्झाउँदै अफगानिस्तानमा महिलाहरुको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् ।
अमेरिकाको बोस्टनबाट अफगानिस्तानमा जे भैरहेको छ उनले त्यसमाथि निगरानी गरिरहेकी छिन्। मलालाको बोस्टनमा अनुहारको पक्षाघातको शल्यक्रिया भइरहेको छ । यो शल्यक्रिया पाकिस्तानी तालिवानले चलाएको गोलीका कारण भएको बताइएको छ ।
मलालालाई पाकिस्तानी तालिवान चरमपन्थीले अक्टोबर २०१२ मा गोली हानेका थिए। तब उनी स्कुल जाँदै थिइन् । त्यो दिन सम्झिँदै उनी अफगानिस्तानमा तालिवानको कब्जाको कारण महिलाहरु पीडित हुन सक्नेबारे चिन्ता गर्छिन् । मलालाले भनिन, ‘नौ वर्ष बितिसक्दा पनि म एउटा गोलीबाट निको हुन सकेको छैन, अफगानिस्तानका जनताले विगत चार दशकमा लाखौं गोलीको पीडा भोग्नु परेको छ। मेरो मुटु उनीहरुको लागि दुखेको छ जसले सहयोगको लागि बिन्ती गरे तर कुनै जवाफ पाइन, हामी उनीहरुको नाम भुल्नेछौं वा हामी कहिल्यै थाहा पाउने छैनौं।’
उनी अगाडि भन्छिन्, ‘म विश्वभरिका राज्यका प्रमुखहरुलाई पत्र लेख्दै छु, उनीहरुसंग फोनमा कुरा गर्दैछु। म ती कार्यकर्ताहरु लाई सम्पर्क गर्दै छु जो अझै अफगानिस्तानमा महिला अधिकारको लागि लडिरहेका छन्। पछिल्लो दुई हप्तामा, हामीले धेरै मानिसहरुलाई सुरक्षित स्थानहरुमा पुग्न मद्दत गरेका छौं। तर मलाई थाहा छ हामी सबैलाई मद्दत गर्न सक्दैनौं।’
उनलाई अफगानिस्तानमा तालिवानको कब्जा भएदेखि नै महिलाहरुको बारेमा धेरै चिन्ता छ। जब तालिवानले सन् १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानमा शासन गरे तब महिलाहरुको हालत धेरै खराब थियो।
मलालाले लेखेकी छिन्, ‘म बोस्टनको अस्पतालमा ओछ्यानमा छु। यो मेरो छैटौं शल्यक्रिया हो। तालिवानले मेरो शरीरलाई पारेको क्षतिबाट बाहिर निस्कन डाक्टरहरु अझै काम गरिरहेका छन्। अक्टोबर २०१२ मा पाकिस्तानी तालिवानका एक सदस्यले मलाई स्कूल जाने बाटोमा टाउकोको देब्रे भागमा गोली हान्यो।गोलीको प्रभाव मेरो देब्रे आँखा, खोपडी र मस्तिष्कसम्म पुगेका छ । यस बाहेक, मेरो अनुहारमा पनि भारी क्षति पुगेको छ । मेरो कानको पाना पनि भाँचियो।
मेरो आँखा र कानको बीचको हड्डी हटाइयो। चोटपछि मेरो मस्तिष्क फैलियो । शल्य चिकित्सकको कारण, म बाँच्न सक्षम भएँ, तर चाँडै मेरो अंगहरु काम गर्न बन्द भयो र म इस्लामाबादको लागि एयरलाइफ्ट गरीयो। एक हप्तापछि, डाक्टरहरुलाई लाग्यो कि मेरो लागि राम्रो उपचारको आवश्यकता छ र देश बाहिर पठाइयो।’
मलालाले अगाडि लेख्छिन, ‘त्यसबेला म कोमामा थिएँ। जब मैले बेलायतको बर्मिंघमको क्वीन एलिजाबेथ अस्पतालमा आँखा खोलेँ, मैले महसुस गरें कि म जीवित छु। त्यो भन्दा पहिले मलाई केहि याद थिएन। मलाई थाहा थिएन म कहाँ छु।’
म धमिलो देख्न सक्थें। मेरो घाँटीमा ट्यूब भएको कारणले म बोल्न असमर्थ थिएँ। म आउँदो दिनहरुमा कुरा गर्न सक्दिन, तर म नोटबुकमा लेख्न थाले। जो कोहि मेरो कोठामा आउँथे, यो लिखित देखाउनको लागि प्रयोग गरीयो। म प्रश्न सोधें, मलाई के भयो?, मेरो बुबा कहाँ हुनुहुन्छ? यो उपचार को लागि कसले खर्च तिर्दैछ? हामीसँग पैसा छैन।
ऐनामा हेर्न छोड्यो
मलालाले लेखेर नर्सहरुलाई आफू आफैंलाई हेर्न चाहेको भनिन्। उनले आधा अनुहार मात्र चिनेकी बताइन् । उनको अनुहारको अर्को आधा एक अपरिचित जस्तो देखिन्थ्यो। कालो आँखा, छरिएको बन्दुकको पाउडर, कुनै मुस्कान नभएको, कुनै इशारा नभएको ।
उनको टाउकोको आधा कपाल हटाइयो। उनले तालिवानले उनको कपाल काटेको सोचेकी थिइन्, तर उनको कपला डाक्टरहरुले उनको शल्यक्रियाको लागि कपाल काटेका नर्सले उनलाई बताएकी थिइन् । उनी आफूलाई शान्त राख्न कोसिस गर्दै जब उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुन्छिन् तब उनी एउटा जागिर पाउने र केहि पैसा कमाउने र एक फोन किन्ने सपना बोकेकी थिइन् उनले । उनले अस्पतालको बिल भुक्तान नभएसम्म कमाउने आसा बोकेकी थिइन् ।
मलालाले लेखेकी छिन्, ‘म मेरो शक्तिमा विश्वास गर्छु। मलाई लाग्थ्यो कि अस्पताल छोडेपछि, म एक बालक जस्तै उड्नेछु र छिटो दौडनेछु तर मैले चाँडै महसुस गरें कि मेरो शरीरको धेरै जसो भागहरु अगाडि बढ्न सक्दैन। डाक्टरहरुले भने कि यो अस्थायी हो।’
मलालाले अगाडि लेखेकी छिन्, ‘मैले मेरो पेट छुएँ। मेरो पेट धेरै कडा थियो। मैले नर्सलाई सोधें कि मेरो पेटमा कुनै समस्या छ? जब पाकिस्तानी सर्जनले खोपडीको हड्डी हटाएर त्यो हड्डी मेरो पेटमा सारिएको नर्सले भनिन्’।
यसको लागि उनले अर्को शल्यक्रिया गर्नुर्पयो ताकि खोपडीको हड्डी टाउकोबाट सार्न सकियोस । तर बेलायतका डाक्टरहरुले टाउकोको हड्डीलाई टाइटेनियम प्लेटको साथ बदल्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
यो इन्फेक्सनको जोखिम कम गर्नको लागि गरिएको थियो। यो प्रक्रिया क्रेनोप्लास्टी भनिन्छ। डाक्टरहरूले उनको पेटबाट खोपडीको हड्डी निकाले। उनको कोक्लियर टाइटेनियम क्रिमिप्लास्टीको बेला पनि प्रत्यारोपण गरिएको थियो किनकि मेरो कानको कव पनि गोलीले फालेको थियो। उनले शारीरिक थेरापी सुरु गरिन् । उनले बिस्तारै हिड्न खोजिन्। बच्चा जस्तै, उनी कदम चाल्थिन्। उनलाई लाग्यो उनको दोस्रो जीवन सुुरू भयो।
बेलायत आइपुगेको ६ हप्तापछि डाक्टरहरुले अनुहारको पक्षाघातको उपचार गर्ने निर्णय गरे। यसको लागि उनको अनुहार फेरि काटिएको थियो र उनको अनुहारको नर्व जो अलग गरिएको थियो सिलाईको लागि एक प्रयास गरिएको थियो। डाक्टरहरूले आशा गरे कि यसले चलाउनको लागि सहज बनाउनेछ।
नर्व शल्यक्रियासंग अनुहार मालिशको केहि महिनापछि उनको अनुहारमा केहि सुधार आएको थियो। यदि उनी बन्द ओठसंग मुस्कुराए उनी उनको पुरानो अनुहार देख्न सक्ने आसामा थिइन्। जब उनी हाँस्न थालिन् । उनको हातले उनको अनुहार छोप्छिन् । ताकि मानिसहरूले नदेखियोस् । किन कि उनको अनुहार दुबै तिर उस्तै छैन। उनले आफैंलाई हेर्न छाडिन्।
मेरा आमा बुबाले जे पनि गुमाउनु भएको थियो उपचारबाट फर्काउन चाहनु हुन्थ्यो । यही कारणले हामी भेट्यौं र बोस्टनमा आएरर धेरै सर्जनहरुसंग कुरा गर्यौं। अनुहार पक्षाघातको उपचार वास्तवमा नै धेरै जटिल रहेछ ।